Mila malina na marina aza… | NewsMada
Efa elaela no tsy nisy resaka firy ny amin’izany hoe laza adina amin’ny fanadinam-panjakana mivoaka alohan’ny fotoana izany; eny, na hoe saika resabe sy nampanahy isan-taona aza izany talohaloha tany. Amin’izao, nahoana izay no nipoitra tampoka tsy ahoan-tsy ahoana indray? Ao raha…
Tsy aiza ny takatra mihinana ny valala fa ao ihany, na ny vano mitsaingoka ny sahona. Matoa mivoaka mialoha ny fotoana ny laza adina bakalorea, misy tompon’andraikitra ao: nanao fanahy iniana na tandrevaka? Nalaky niparitaka izay noho ny fisian’ny tambajotran-tserasera ara-tsosialy.
Soa ihany, na tsara ratsy aza: efa eo an-tanan’ny tompon’andraikitra ny raharaha. Efa misy ny voatana am-ponja amin’izany, na mpampianatra na mpianatra. Na izany aza, anisan’ny ahin’ny sasany ho anton’izao ny hoe fanakorontanana ny fitondram-panjakana sy ny raharaham-pirenena.
Tanàna tsy ilaozan’adala? Na ny tsy maty voalavo an-kibo. Tsy mifankaiza amin’izany ny resaben’ny sasany momba ny tetikasa hananganana tanàna vaovao Tana-Masoandro. Fanakorontanana? Eny, na ny amin’ny maha ara-dalàna na tsia ny fanendrena governoran’ny faritra aza.
Inona na ahoana koa? Amin’izao, misy ny minia manakorontana amin’izay miseho sy atao rehetra. Efa tsy hita izay iainana? Mandeha ny fampandrosoana rehefa misy ny filaminana, fitoniana, fifampitokisana, fifanomezan-tanana. Izay no tsy zakan’ny sasany? Efa zatra korontana tsinona.
Na izany aza, mila malina ny tena na marina toy inona aza: ny vy tsy mikitrana irery. Sao voafandrika amin’izany, ka roboka amin’izay ady atsanga. Tsy kely lalana ny ratsy. Ny vitsy koa anefa mikitrana irery, fa tsy hisy mpihaino na mpanaraka raha mitandrina ny tsirairay sy ny besinimaro.
Raha sanatria misy na avela handeha ho azy amin’izao ny korontana, mila tsy ho fantatra intsony hoe: iza no manakorontana, inona no kendreny, inona no ataony… ? Tsara dinihina izay mitranga, fa tsy tongatonga ho azy amin’izao. Misy antony ao ary araka izay ny hatao, tsy ataotao foana.